काँग्रेस सांसदलार्इ अोलीको व्यंग्यः बाहिर निस्किँदा ड्राइभरले सोध्लान अोलीलार्इ भोट किन नहालेको ? – Halkaro
प्रकाशित मिति : २०७४, २७ फाल्गुन आईतवार
प्रधानमन्त्री अोलीले अाँफूलार्इ भोट नहाल्ने सांसदलाई गाडीका ड्राइभरले, सुरक्षा गार्डले र घरमा खाना पकाउने मानिसले प्रश्न गर्ने समेत बताए । ‘भोट नदिने सांसदलाई सबैभन्दा बढी उनीहरुकै मनले प्रश्न गर्ने र राति निद्रा बिग्रनसक्ने उनले तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘बाहिर निस्केपछि ड्राइभरले सोध्ला, केपी ओलीलाई किन भोट नदिएको ? गार्डले सोध्ला- केपी ओलीलाई किन भोट नदिएको म्याडम ? खाना बनाउँदै गर्दा भान्सामा सोधिएला दिदी केपी ओलीलाई भोट दिनुभएन ? मलाई भोट दिनुभएन भने पनि माननीयहरुको निद्रा नबिथोलियोस् । तपाईलाई आफ्नै मनले सोध्छ ।’
← सभामुखलार्इ शुभकामन दिँदै सांसदले उठाए कैलाली घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग
कैलाली घटनाः अाफ्नी पार्वती बनाउन नपाएपछि राधा राधामाथी यातना →